Cristiano Ronaldo “Ma doonayo inaan Tababare noqdo marka aan ciyaaraha ka fariisto” – Gool FM
Cristiano Ronaldo “Ma doonayo inaan Tababare noqdo marka aan ciyaaraha ka fariisto”
(Madrid), 28 Sebt, 2016 –Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Waddanka Spain, Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay mustaqbalka inuusan jeclayn in uu tababare noqdo kolka uu ka fariisto ciyaaraha.
Isagoo hadlayay kaddib markii uu xalay dhaliyay goolkiisii 98 ee Real Madrid tartanka Yurub ciyaartii ay 2-2 la galeen Dortmund ayaa waxa uu 31 jirku sheegay inuu diiradda saari doono cayaarihiisa waqtiga haatan la joogo.
“Haatan, ma doonayo inaan tababare noqdo, dhowr sano kaddib dadku waxay i leeyihiin waxaad leedahay diiwaan fiican, balse anigu ma doonayo” ayuu yiri Ronaldo7.
“Aad bay u dhib badan tahay, waqti xaadirkaan waxaan jeclahay inaan cayaarahayga diiradda saaro oo ah isboortiga aan jeclahay, cidina ma garan karto mustaqbalka, laga yaabee in 5, 6 ama 7 sano ee soo socota inaan maskaxdayda beddelo oo aan tababare noqdo” ayuu sii raaciyay Cristiano.
“Sanadkii la soo dhaafay waxa uu dhab ahaantii ahaa kii iigu fiicnaa, sanad walba oo cayaarahayga ka mid ah waxa uu ahaa mid hagaagsan balse sanadkan waa mid cajiib ah” ayaa laga hayaa xidigga reer Portugal.
Ronaldo waxa uu sheegay in uu jecel yahay in Real Madrid ku guuleysato Koobka Horyaallada Yurub sanadkan si ay laba jeer oo isku xigta u qaadaan. “Markaad u dheeleyso Real Madrid waa inaad aamintaa in aad samayn karto, waxaan haysannaa koox wanaagsan iyo tababare fiican, sidoo kale khibrad ayaan ka haysannaa sanadkii la soo dhaafay” ayuu sheegay Ronaldo.